Marka hore waxaan ka cudurdaaranaya inaanan ahayn ninki ku habboonaa su'aashaan. Maahi aqoonyahan. Takhasus gooni ah uma lihi dhibaatooyinka noocaan oo kale ah. Sidoo kale ma jirto cilmibaaris aan sameeyay oo aan ku salaynayo mushkiladda uu Ayaanle sheegay. Sidaa darteed wixii aan halkaan ku qoro waa sida ay aniga ila tahay. Maahan nas iyo arrin haysato baaris qoto dheer. Waa dood furan oo qof walba uu aragtidiisa ka dhiiban karo. Kaliya markaan ka doodno mushkilada jirto ayuu xalku noo muuqan karaa.
Sidoo kale, horumarka dhaqaale, kan aqooneed iyo kan tegnoolojiyadeedba waxaa hormuudka ah dhalin yaro. Maqli maysid oday ayaa hal abuuray aalad cusub. Laga yaabo mid dhalinyaronimo ku billaabay iqtiraaq inuu da' weyn kale ku sameeyo. Sidaa darteed dhalinta oo madasha hormuudka nolosha laga waayo waa musiibo aan la dhayalsan karin iyo dib u dhac bulsho oo dheelinayo.
Sanad walba waxaa da'o roobab xoog badan kuwaas oo buuxiyo bololaha waaweyn ee gobalka Gedo. Sidi aan maalin aan fogayn idinla wadaagay https://ibrahim-shire.blogspot.co.uk/2018/04/reer-rag-leeyahay-roob-saan-ma-u-galaa.html biyaha badan ee ay boholuhu keenaan waxay socod ku maraan dhul ballaaran iyagoo yaacayo oo ku jihaysan xaggaas iyo Wabi Jubba. Inta ay socdaan waa laga cabbaa, beero xoogaa ah ayay waraabiyaan laakiin wax kale lagama dheefo oo sidaas ayay ku dhaafaan gobalka.
Haddii aan usoo laabto su'aasha Ayaalne jawaabteeda. Dhalintu uma baahna in la mideeyo. Gobalku aad ayuu u ballaaran yahay waxaana ku nool dad badan oo kala duwan. Dhaqaale, xirfad, aqoon, siyaasad iyo hammi intaba waa ku kala duwan tahay dhalintu. Sidaas darteed inay mid noqoto ma dhici karto. Kala duwanaanshuhu sidiisaba dhib ma keeno ee isqabsiga iyo wada shaqayn la'aanta ayaa keento.
Waa iga dhan tahay waana dood furan oo u baahan in laga wada qayb qaato. Farriin ahaan waad iigu soo diri kartaan inboxka.